Beeldaaje Maxamed Iyo Wafti uu Hoggaaminayo oo Lagu Soo Dhaweeyay Carmo [SAWIRRO/VIDEO] | SAHAN ONLINE
Beeldaaje Maxamed Iyo Wafti uu Hoggaaminayo oo Lagu Soo Dhaweeyay Carmo [SAWIRRO/VIDEO]
CARMO- Magaaladda Carmo ee gobolka Bari waxaa isugu soo baxay kumaakun dadweyne ah oo soo dhaweyn ballaaran u sameeyay Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Cabdullaahi iyo wafti ballaaran oo uu hoggaaminayo oo ka soo ambabaxay magaaladda Boosaaso.
Beeldaajaha waxaa soo dhaweeyay Masuuliyiinta dowladda, siyaasiyiin, isimo, Cuqaal, Culumo, Ganacsato, dhalinyaro, Haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Carmo, waxaana lagu dhaweeyay Fardo iyo caleemo. beeldaajuhu wuxuu mid mid u gacan qaaday Masuuliyiinta iyo shacabkii soo dhaweeyay.
Beeldaajaha iyo waftigiisa waxay socod ku mareen wadada laamiga ee dhexmarta degmadda Carmo, isagoo u gacan haadinayay dadweynihii faraxsanaa ee hareeraha wadada taagnaan.
Maalinta Axada ee bishu tahay 15 April 2018 ayaa lagu wadaa inay dhacdo Munaasabadda Caleemo-saarka Beeldaaha, Waxaa la filayaa inay ka soo qaybgalaan dad gaaraya shan kun oo qof oo isugu jira Madaxda sare ee dowladda Puntland, dowladda Federaalka, Salaadaanin kala duwan oo ka kala imaanaysa dhamaan dhulka dadka Soomaaliyeed degaan.